XR150DⅢ bokujikeleza Drilling Rig
I-XR150Dary yokujikeleza ukujikeleza, ubukhulu bokuphinda buguquke bunokufikelela kwi-1500mm, ubuninzi bokumba ubunzulu bunokufikelela kwi-55m, eyona torque iphezulu ikn · m, amandla e-injini yi-133kW, kwaye yamkela ukubola kombhobho kunye nombhobho wokutshixa umatshini.
I-XR150DⅢ yokumba izixhobo ezijikelezayo zenziwe nge-chassis yokukhasa kunye nesithuthi esiphezulu, kwaye isetyenziselwa ukubhola iimfumba zekhonkrithi ze-in-situ kwi-Expressways nakwezinye iiprojekthi zesiseko. Liye laba sisixhobo umngxuma engundoqo yokwakha mfumba ekruqulayo.
1.Yamkela i-hydraulic telescopic crawler chassis kunye nobubanzi obukhulu be-slewing bearing, obuzinzileyo ngokungaqhelekanga kunye nokuhamba ngokulula.
2.Yamkela i-Guangxi Cummins i-injini elawulwa ngekhompyutha ene-turbocharged enegunya elinamandla kwaye iyahlangabezana nemilinganiselo ye-Euro III.
3. Inkqubo ye-hydraulic isebenzisa umbane wolawulo lwamandla kunye nokuhamba okungalunganga, ngenkqubo ephezulu yokusebenza kunye nokonga umbane.
4. Ikhonsoli enezixhobo ezahlukeneyo kunye neziphatho zokusebenza ikulungele kakhulu ukusebenza.
5. Ukucwangciswa kweentonga ezahlukeneyo zokubalula ezahlukeneyo kunokusetyenziselwa ulwakhiwo olusebenzayo kwimiqolo eyahlukeneyo.
6. Faka isixhobo sokujonga iliso esinamandla seLCD.
Ubukhulu bokubhola obukhulu
Ubunzulu bokumba ubuninzi
Isithuba sokumisa esivumelekileyo (ukusuka embindini wentonga yokugrumba ukuya kwiziko lokucheba)
Ukubhola ubungakanani bemo yokusebenza (L × W × H)
Ukubhola ubungakanani be rig kwimo yezothutho (L × W × H)
Ubunzima beyunithi iyonke (ubumbeko oluqhelekileyo, kubandakanya izixhobo zokomba)
Ikaliwe amandla / isantya
150/2050 r / min
Uxinzelelo olusebenzayo lwe-h ydraulic system
Ilungu lePalamente a
R otary ukuqhuba Max.torque
r / m kwi
Isihlwele isilinda Max.P amandla wokusebenzisa
Ubunzima bePulli ng
Into ngentambo Main Amandla okutsala okuphezulu okuphezulu
Isantya sentambo esisodwa
D ubukhulu beentambo zentsimbi
Into ngentambo Auxiliary Amandla okutsala okuphezulu okuphezulu
Imasti yokomba Ekhohlo / ekunene ukuthambekela lwemasti
Ngaphambili / umva utyekelo lwemasti
Itheyibhile ye-Angle R ye-otary slewing angle
Ukuhamba Isantya sokuxhuzula kweMax.t yeyunithi iyonke
Ubukhulu be-Max.c yomlinganiso weyunithi iyonke
Ukukhasa Ububanzi ipleyiti qha
Ububanzi bangaphandle bokukhasa (min.-max.)
Umgama weziko phakathi kwamavili amabini akude okukhasa
Umndilili woxinzelelo lomhlaba
Uqwalaselo lweeNxalenye eziPhambili
Impompo eziphambili ngamanzi
Ngesanti kubunzulu baphantsi main valve
Ngesanti kubunzulu baphantsi yesixhobo yentloko unit
Isibambo solawulo lomqhubi
Main sokutsala into ngentambo s (s kubandakanya iimoto)
Slewing reducer (kubandakanya imoto)
I-Rotary drive yokunciphisa
Egqithileyo I-YG -13 isixhobo sokugrumba mini
Okulandelayo: XR220D yokujikeleza ukumba rig
Umatshini wokufaka ikhonkrithi
imfumba uyadika umatshini
imfumba yokomba umatshini
imfumba yezixhobo zokuqhuba ezithengiswayo
Ukufumba ixabiso lomatshini
ojikelezayo wokugrumba isixhobo
Rotary Imfumba Drilling Rig
Umatshini wokushicilela ojikelezayo
XR280D yokujikeleza ukubhola rig
Umatshini wokugrumba amaqula, Horizontal Directional Ukubhola Rig, I-hdd rig, umatshini wokugrumba i-hdd,